WAR SAXAAFADEED 2nd March 2005
Somali Concern Group (SCG) si aad iyo aad ah ayuu uga welwelsanyahay arrimaha siyaasadda ee waddanka iyo hadal heynta in ciidamo shisheeye waddanka la keenayo dhowaan. SCG waxey aaminsantahay in nabadda iyo nabadgelyadaba ay muhiim yihiin, ha yeeshee, waxaan uga digeynaa xukuumadda inay hubiyaan in habka lagu keenayo ciidamadu uu aheado mid waafaqsan sharciga, qaabkana uu cad yahay. Xukuumaddu waa inay u gudbisaa taladdeeda Baarlamaanka si ay uga doodaan oo ay u lafa guraan arrinta. Baarlamaanku waa inuu tixgeliyaa fursadaha jira oo dhan si xildhibaanadu ay u gaaraan go’aan wax ku ool ah.
SCG waxey dalbaneysaa in ciidamada ay ahaadaan kuwo dhexdhexaad ah oo aan u kala eexaneynin Somalida.
SCG waxey fahamsantahay muhiimadda nabadda iyo amniga anagoo rumeysan in ciidan caalami, dhexdhexaad ah oo aan u kala eexan Somalida ay muhiim u tahay in Somaliya loo helo, si loo xoojiyo kalsoonida Somalida dhexdeeda. Ha yeeshee SCG waxey si xoog leh u aaminsantahay in ciidamada wadamada safka hore in aan la keenin waddanka oo aysan ka mid noqon ciidamada. Ciidamadu waa inay leeyihiin qorshe cad oo habeysan oo siin kara kalsooni Somalida iyo in qaabka ay go’aanka u gaarayaan uu noqdo mid qeexan oo ku abuuri kara kalsooni Somalida. Waa muhiim inay ciidamadu ay soo bandhigaan qorshahooda oo qoraal ah ka hor inta aan xildhibaanadu ka doodin.
SCG waxey kula talineysaa xukuumadda inay fahamto muhiimadda dib u heshiisiinta, dib u dhiska iyo guud ahaan sidii loo dhisi lahaa kalsoonida ummadda dhexdeeda. SCG waxey talo ku soo jeedineysaa arrimahan:
1) Madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaaraha:
Inay la yimaadaan hoggaan dhab ah iyo jaceyl shacabkooda ah.
Inay u hoggaansamaan sharciga, demoqradiyadda iyo in lala xisaabtamo.
Inaan ciidamada lagu soo darin waddamada dariska ah.
Inaad u horseedaan waddaninimo, xoriyad iyo nabad.
Inaad isticmaashaan hadallo dib u heshiisiineed markaad hadleysaan, si loo yareeyo walwal iyo rabshado hor leh.
In dood wanaagsan oo tayo leh ka sameysaan arrimaha ciidamada, haddii ay suuro galtahayna aad dalbataan khubaro ka warbixiya faa’iidada iyo khasaaraha ka iman kara.
Habka go’aan gaaridu waa inuu ahaadaa mid qayaxan oo aan muran ku jirin.
Inaad sida ugu dhaqsiyaha badan ugu laabataan waddankii hooyo.
Go’aankiinu waa inuu ku saleysnaadaa danta ummadda.
Xildhibaanada hubka heysta waa inay si buuxda u caddeeyaan inay taageerayaan dowladda iyo inay diyaar u yihiin inay ciidamadooda hubka ka dhigaan.
Inay taageeraan dowladda iyo baarlamaankaba.
Inay ka heshiiyaan khilaafka dhexdooda yaala oo ay ogaadaan awoodooda buuxda.
Inay qeyb ka qaataan qorshaha nabadda iyo xallinta khilaafka.
Inay wada shaqeeyaan si loo helo nabad iyo amni iyo degenaan waddanka gudihiisa.
Inay u noqdaan waddanka safiiro wanaagsan oo dan guud iyo hal ujeedo leh, taasoo ah sidii loo soo nooleyn lahaa sharabtii ummadda soomaaliyeed.
Inay taageeraan hay’adaha ku howlan sidii isbedel dhab ah waddanka looga sameyn lahaa sida SCG, National Civic Forum, iwm.
4) Waddamada iyo hay’adaha Caalamka:
Inay taageeraan dowladda xag siyaasad, dhaqaale iyo dhan walba.
Inay caawiyaan dowladda xagga demoqradiyada iyo sharcigaba.
Inay hubiyaan in dowladda ay fuliso go’aamada ay saxiixaan.
Inay joojiyaan in ciidamo safka hore ah ay waddanka soo galaan.
Inay oofiyaan axdigii qaramada midoobay ee cunaqabateenta hubka soo gala waddanka.
Guddoomiyaha ururka Somali Concern Group